Filankevitry ny fampihavanana : Maka Alphonse, Rabe Landry ary i Mangalaza no miady ny toeran’ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaFilankevitry ny fampihavanana : Maka Alphonse, Rabe Landry ary i Mangalaza no miady ny toeran’ny Filoha
Tontosa omaly maraina tetsy amin’ny fitsarana tampony ny fianianana izay notanterahin’ireo mpikambana miisa33 handrafitra ny filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy, izay natrehan’ireo tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena tarihin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Dingana manaraka izay andrasan’ny besinimaro kosa ireo izay handrafitra ny birao maharitra eo anivon’ ity andriam-panjakana ity, ka mpikambana miisa roa no efa hita fa miady izany toerana izany, dia eo i Maka Alphonse izay efa mpitondran-tenin’ny FFM teo aloha sady mpanao gazety, ary hifaninana aminy amin’ izany i Rabe Landry izay efa fantatra ihany koa teo amin’ny sehatry ny raharaham-pirenena. Mizarazara ihany ny hevitr’ireo mpikambana eo anivon’ny filankevitry ny Fampihavanana Malagasy, raha io resaka fifidianana izay ho filoha io no nanontaniana azy ireo , na izany aza anefa dia mihaodihaody eo ihany koa ny ekipan’ny Amiraly Ratsiraka izay maro an’isa anatin’ ity andrim-panjakana ity, saingy kosa ny olana dia mizarazara ny hevitr’izy ireo, ary tsy dia miray hina be ny any.
Alohan’ny hirosoana amin’ny fandrafetana ny birao maharitra io anefa, dia mbola misy ireo antanan-tonatra izay ho dinganina vao ho tonga amin’io fifidianana io, izany hoe manomboka ny vaninandro androana ny fandrafetana ny fitsipika anatiny izay mbola handalo fanaraha-maso eny amin’ny fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenana . Raha ny firafitry ny birao maharitra moa dia ahitana filoha, filoha lefitra enina ary mpampaka-teny roa. Asa goavana ihany koa no miandry ireto mpikambana vaovao ireto satria dia hiankinan’ny fiainam-pirenena tokoa, eo ny fandinihana ny mikasika ny fanonerana , raha araka ny voalazan’ny lalàna dia manomboka ny taona 2002 hatramin’ny niafaran’ny Tetezamita, izany hoe manomboka amin’ny fotoana nanaovan’ny Filoham-pirenena ankehitriny ny fianianana no hodinihin’ny mpikambana. Anisan’ny tafiditra anatin’ny anjara asan’ izy ireo ihany koa na izany aza ny momba ireo raharaha rehetra izay mety hiteraka krizy, na disadisa, na io ara-tsosialy, na ara-ekonomika, na eo amin’ny lafin’ny fiarahamonina.
Malalaka tokoa, ary tsy misy teritery ny fanatanterahan’ireo mpikambana ny asany satria efa voafaritry ny lalàna 2016-037 izany milaza fa “ malalaka amin’ny asa tanterahiny ireo mpikambana ka tsy tokony hisy ny fanerena na avy amin’ iza, na avy amin’ iza’’. Ny fanjakana misy ankehitriny kosa izay efa hatrany am-boalohany no nametraka ny fahalalahan’ny mpikambana hanatanteraka ny asany, raha tsiahivina mantsy nandritra ny fihaonan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpikambana taorian’ny fanendrena dia mazava ny nambaran’ny Filoha “malalaka ianareo ary tsy misy ny teritey avy aty aminay’’. Nanamafy izany rahateo ny praiminisitra androany tetsy Anosy izay nilazany fa “ samy nanao fianianana ireo olona tsirairay mpikambana teo, ary voalaza nandritra izany fianianana izany fa tsy azon’iza n’iza hobaikoana, ary hanaja tanteraka ny fahaleovantenany. Izahay ihany koa, izay tompon’andraikitra eto dia milaza fa tsy hijabaka amin’ ny asan’izy ireo. Noho izany, andrasana ny fivoaran’ny asa izay tanterahin’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy.